Taariikhda iyo Himilada | BGA
Taariikhda BGA iyo VIsion
Boston Green Academy waa meel gaar ah, Horace Mann 'oo ku taal degmada' Charter School oo si sharaf leh qayb uga ah Dugsiyada Dadweynaha Boston. Waxaa aasaasey 2011 koox ay ka go'antahay barayaasha Boston iyo xubnaha bulshada, BGA waa dugsiga kaliya ee Boston ee diiradda saaraya joogtaynta iyo diyaarinta jiilka xiga ee hogaamiyaasha kaladuwan ee kulleejooyinka iyo shaqooyinka cagaaran.
Markii la waydiiyo Dugsiyada Dadweynaha Boston inay u rogaan dugsiga sare ee halgan, BGA si guul leh ayuu 'dib ugu bilaabay' Dugsiga Sare ee Odyssey ee Koonfurta Boston saddex sano gudahoodna wuxuu noqday iskuulkii ugu fiicnaa ee ku yaal Dugsiyada Dadweynaha Boston iyo mid ka mid ah kuwa ugu horumarka gobolka. ballaaran. Sanadkii 2014, BGA wuxuu u guuray Taft Building taariikhi ah ee Brighton wuxuuna bilaabay fidinteena si loogu daro darajooyinka dhexe, laga bilaabo fasalka 6aad. Sanadkii 2017, BGA wuxuu galey yoolkeena ah inuu noqdo iskuul buuxa oo ah fasalada 6-12 ee u adeegaya ku dhawaad ​​500 arday xaafad walba iyo asalka Boston. BGA wuxuu sii ahaanayaa mid ka mid ah dugsiyada ugu horumarsan iyo kuwa casriga ah ee Dugsiyada Dadweynaha Boston.
Codsigayagii asalka ahaa ee Axdiga iyo shaqadeena sanadka dambe, BGA aaminsanaanta iyo himilooyinka ayaa u yimid inay hagaan shaqadeena:
Rajooyinka Sare ee Taageerada Sare ee adag, laxiriirta, waxbarida iyo u diyaarinta xirfadaha iyo waxbarashada waa xarunta iskuulka ee ardayda oo dhan. Waxaan qiimeyneynaa xiisaha caqliga iyo koritaanka waxaanan bixinnaa manhaj, tilmaam, iyo fursado taageeraya.
Dugsi Cagaaran 'waa lagama maarmaan Adduunkeennu wuxuu wajahayaa caqabado aad u adag. Si aan uga dhigno bulshooyinkayaga iyo adduunkaba sii waara, waxaan ku dadaalnaa inaan noqono iskuul cagaaran oo tusaale u ah u diyaarinta ardaydeena kala duwan iyo kartida leh inay noqdaan hogaamiyaasha qaybta cagaaran ee hal abuurka Boston iyo wixii ka dambeeya.
Fenway High School as a Foundation Foundation adag Nooca Fenway High School wuxuu u adeegaa ardayda oo dhan, gaar ahaan ardayda kala duwan. Fenway fikradihiisa asaasiga ah waxay gacan ka geysteen dhisida aasaaska BGA iyo sii wadida hagida iyo saameyn ku yeelashada koritaanka iyo horumarka, xitaa sidii aan u horumarin laheyn aqoonsigeenna iyo waddo gaar ah oo aan horay u soconno.
Noqo Model 6-12 Iskuul Si wax ku ool ah loogu adeego ardayda Boston, waxaan ku taageernaa sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah si loo kordhiyo fursadaha iyo natiijooyinka. BGA waxay si adag ugu shaqeysaa sidii ay u noqon laheyd moodal 6-12 ah oo ardayda ka caawiya inay uga sii gudbaan koritaanka qaab dhismeedka, kobcinta ku habboon ee waayo-aragnimada dugsiga dhexe ee ku wajahan awoodsiinta qunyar socodka iyo madaxbanaanida dugsiga sare iyo wixii ka dambeeya.
Arimaha Kaladuwan ee Iskuulkayagu wuxuu u heellan yahay u adeegida iyo awood siinta dadyow kaladuwan, oo ay kujiraan Ardayda Naafada ah, Barteyaalka Luuqada Ingiriiska ee dhamaan luqadaha, iyo ardayda halista ku jirta. Waxaan shaqaaleysiin, diiwaan gelinaa, xafidnaa oo qalin jabineynaa arday arday ah oo matalaysa magaalada Magaalada Boston waxaanan taageerna ubadkeena dhalinyarada xaquuqdooda dhaqan iyo muujinta shaqsiyadeed.
Xiriirka Kaxirnaanshaha Wadahadalka Marka ardaydeenu aaminaan shaqaalaheena, waxaan awoodnaa inaan si wanaagsan ugu adeegno. BGA waa goob soo dhoweyn leh oo taageera horumarka bulshada-shucuurta ee ardaydayada. Iyada oo loo marayo La-talinta, Toddobaadka Mashruuca, Caddaaladda Dib-u-soo celinta, dhaqanka dugsiga ee wanaagsan iyo xiisadaha yaryar, ardaydayada iyo shaqaalaheennu waxay yeeshaan horumarin adag oo xoojiya bulshadeena.
U adeega ardayda oo dhan Si loogu adeego ardayda si hufan, waxaa naga go'an inaan noqono iskuul xasaasi ah oo ardayda siiya taageero shucuureed bulsho dhan, gaar ahaan kuwa halgama. Waxaan maalgashanaa Kooxda Taageerada Ardayga oo xoog leh iyo ilo loogu talagalay ardayda iyo shaqaalaha si ay nooga caawiyaan inaan ugu adeegno dadkeena si wax ku ool ah.
BGA waxay sameysay horumar aad u wanaagsan ilaa markii aasaaska la aasaasay 2011, laakiin waxaan wali haysannaa shaqooyin badan oo aan qaban karno. Thanks to shaqada dadaalka leh ee ardaydeena, qoysaska, shaqaalaha iyo shuraakada, iskuulkeena wuu sii wadaayaa oo wuu sii kobcayaa. Waxaan kugu casuunaynaa inaad waxbadan ka ogaato shaqadeena oo aad ku taageerto iskuulkeena gaarka ah qaabkastoo aad awoodid.